ဂမ္ဘီရ ပညာတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဂမ္ဘီရ ပညာတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့
ဂမ္ဘီရ ပညာတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့
Posted by fatty on Jan 21, 2011 in News |3comments
ခေတ်ကြီးက … i pod i pad i phone … တရုပ်နဲ့ အမေ၇ိကန် ကလည်း တယာက်နဲ့တယောက်အလွတ်မပေး၇ဲ …။ ကမ္ဘာကြီးကလည်းချူချာ ..။
အဲဒီထဲကမှ ဂမ္ဘီရ ပညာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ … ဒီစာမျက်နှာမှာ မသင့်တော်ရင်တော့ခွင့်လွှတ်ကြပါ …။
ကျနော် ၉ တန်း တုန်းက ကံအားလျှော်စွာ ပုဂ္ဂလပညတ်ဓါတ်ကျမ်း ကြီးကိုဖတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ..။ အဲဒီကစပြိးကျနော်လဲ စိတ်ဝင်စားလာပါတယ် ..။
လေ့လာတယ် ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်တယ် ..။ အခုတော့ အများပြောကြတဲ့ ဘိုးဘိုးအောင် ဘိုးမင်းခေါင် အောင်မင်းခေါင် ( စင်္ကြာမင်းခေါင် )
တို့အကြောင်းလေးနဲနဲစရအောင် …။ သူတို့သမိုင်းတွေအရင်မေ၇းတော့ပါဘူး တချို့လဲသိပြီးသားတွေပါ။ သမိုင်းကသမိုင်းဘဲပေါ့။
ကျနော့ဆန္ဒက စူးစမ်းကြည့်ချင်တယ် အကိုးအကားရှာချင်တယ်။ ကုိူယ်တိုင်တွေ့ချင်တယ် ..။
ဆိုလိုတာက ကောင်းတာလုပ်ရင် နတ်ပြည်သွားရမဟေ့ မကောင်းတာလုပ်ရင် ငရဲရောက်မယ် ဆိုတာကိုး …။
ဒါပေတဲ့ နတ်ပြည်လဲမမြင်ဘူးကြဘူး ငရဲလဲမမြင်ဘူးကြဘူး …။ လက်တွေ့မှယုံမဲ့လောကကြီးကိုးဗျ ..။
အဲဒီတော့ prove လုပ်ဖို့လိုလာပြီ ..။ သချာင်္လိုဘဲပေါ့ အဖြေကနေပြန်သွားကြည့်ရအောင် …။
ယနေ့သက်ရှိ နာမ်လောကကိုဘယ်သူ ကောင်းကောင်းဆက်ဆံဖူးပါသလဲ …။ ကျနော် သိရသလောက်တော့ ကျော်အောင်စံထားဆရာတော်ကြီးရျိပါတယ်။
သက်ရှိပေါ့လေ ..။ ဆရာတော်ကြီး၇ဲ့ အတွေ့အကြုံတချို့တင်ပြလိုက်ပါတယ် ..။
ဆရာတော်ဘုရားကြီး အလောင်းတော်ကဿပ ဂူတော်ဖွင့်ပြီး အတီင်းဝင်ပုတီးစိတ်နေစဉ် .. မဟာမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရောက်လာ၏။ ကိုယ်တော်လေးလာလာ
ကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ မဟာမြိုင်ထဲလှည့်လည်ြ့ည့်ရအောင် ..။ မဟာမြိုင်ဆရာတော်ကြီးနေသောဂူသီု့ေ၇ာက်သော် ဘိုးမင်းခေါင်ကြီးထွက်လာပြီး အကြော် လဘက်ရည်တို့နှင့်ဧည့်ခံ၏။ ဆန်းလှချည်လား ဘယ်က အကြော်တွေ လက်ဖက်ရည်တွေရတာလဲဟုတွေးနေစဉ် .. ဘိုးမင်းခေါင်က အရှင်ဘုရားကြွလာမယ်ဆိုလို့
လိူင်ဂူတွင်းလှည့်ကြည့်ကြသောအခါ အမိုးမှာ အင်းကွက်မျိုးစုံတို့ဖြင့် စီမံထား၏။ ဆေးအမယ်မျိုးစုံကိုလည်း သူ့ကျောက်သေတ္တာနဲ့သူ သပ်သပ်ယပ်ယပ်
ထား၏။ဥဂမုံး ၁၂၀ အပင်ထောင်ဂမုန်း ၁၆၀ အနွယ်ဂမုန်း ၁၅၀ အစရှိသဖြင့် စုဆောင်းထားသည်များကိုတွေ့ရ၏။
ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် ဘိုးဘိုးအောင် အခြားဝိဇ္ဖာများနှင့် အစီးအဝေး ပြုလုပ်ကြပုံတို့ကို ရေးပြပါက ယခုစာ ရှည်လျှားနေပါမည်။ ဆရာတော်ကြီးမှာ
အမရပူရ ကျော်အောင်စံထားကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးပါသည်။ ဦးပိန်တံတားအနီးမှာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်သို့ကြွပါက ရာဟုဒေါင့် (ေ၇ွှတိဂုန် )
တွင် ကြွတတ်ပါသည်။ …… နောက်မှဆက်ပါမည်။ ဝေဖန်စရာများရှိသော် အားမနာတန်း ဝေဖန်နိုင်ပါသည်။ တကယ့်ဝါသနာရှင်များ အတွက်
ဆရာတော်ကြီး ယခု သက်တော်ရှိစဉ် သွားရောက်ဖူးမျှော် မေးမြန်းပါက အကျိုးရျိပါမည်။ ဘာအကျိုးရျိမည်လဲ ဆိုတော့ သို့လောသို့လော မတင်မကျ
ဘ၀င်မကျသည်များ ကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဆက်ပါဗျို့။ ကျနော်ဦးဖက်ကို ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်တာရာရေးတဲ့ ဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း အကြောင်းစာအုပ် လင့်ခ်ပို့ဖူးတယ်။ ရလား အဲဒါကို ဘယ်လိုထင်လဲ။ ဒါထက် ဦးဖက်စာထဲမှာပါတဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံနဲ့ အပြင်ဖက်က ပိဋကတ်သုံးပုံ တထေရာထဲလား။
ဘိုးမင်းခေါင်း အကြောင်းဆိုရင်တော့ စိတ်ဝင်စားတယ် ။ သိတာလေး ရှယ်ကြပါဦး။ အရင်က အဲ့ဒါမျိုးမမြင်ရတဲ့ အရာတွေကို သိပ်ပြီး အယုံကြည်မရှိခဲ့ပေမဲ့ … တောင့်တတိုင်းဖြစ်လာလျှင် တိုက်ဆိုင်မှူလို့ပဲ ထင်ခဲ့တာ.. အကြောတင်းတင်းနဲ့ စမ်းသပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်လေ …
” တစ်ခါတော့ တိုက်ဆိုင်တာပေါ့…
စတုထ္ထတစ်ခါ… ကြုံထောင့်ကြုံခဲတိုက်ဆိုင်မှူပါပဲ …. မယုံသေးဘူး…။
နောက်တစ်ခါ… အင်း ယုံရမလိုတောင်ဖြစ်လာပြီ…။
နောက်တစ်ခါ….. စဉ်းတော့စဉ်းစားစရာပါပဲ … ။
နောက်တစ်ခါ…… ယုံသွားပါပြီ ”
… အခုလက်ရှိ ဘိုးမင်းခေါင်ပုံကြီး ချိတ်ဆွဲပြီး ကိုးကွယ်နေပါတယ်။ ၀ိဇ္ဖာတစ်ကယ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်း လက်ခံလိုက်ပါပြီ … အခုလက်ရှိအခြေနေထိ သူက ပိုက်ပိုက်ပေးနေတယ်၊ သူပေးတဲ့ပိုက်ပိုက်ထဲက ပြန်ပြီး လှူဒါန်းတာတော့လုပ်ရတာပေါ့ … ။ ပါးစပ်ကသာ ” အဘရေ %*&@! ဆုတောင်း တလိုက် “…. အမြန်ဆုံးကို ဖြစ်တယ်… ကိုယ်တွေ့ပဲ ။
အိတုံရေ ပိုက်ပိုက်ဘဲတောင်းရလါး တို့နိုင်ငံတော်ကြီးအနုကြမ်းစီး ခံနေရတာ လွတ်မြောက်အောင်ဆုတောင်းပေးစမ်းပါ…